Afaka ny zava-drehetra, tsy misy tokony hatao - ny fandroana erotika ho an'ny roa
Saingy satria ny fifanakalozam-pitiavana sy fiainana feno fahafaham-po dia manampy amin'ny fiantohana fa sambatra ny mpianakavy rehetra, ny reny sy ny ray dia tokony hamorona toerana sy handamina fotoana tsy misy ankizy.
Ka raha nahavita angady iray andro afaka ianao dia tsy tokony tara loatra. Ahoana ny fitsangatsanganana an-tanàna? Manolotra ny fotoana mety indrindra ahazoana kojakoja mahafinaritra sy kojakoja ilaina amin'ny hariva miaraka.
Ny jiro dite dia tokony ho eo an-tampon'ny lisitry ny fiantsenana. Manome jiro am-pitiavana ao amin'ny trano fidiovana izy ireo. Ny additives fandroana manitra na ny fandroana sombin-tsakafo dia asaina ihany koa. Satria samy hafa ny safidy momba ny fofona, dia tokony samy handray orona ny mpiara-miasa alohan'ny hifanarahan'ny roa tonta amin'ny vokatra iray.
Mba hanintonana ny saina rehetra ary satria ny fitiavana dia fantatra fa mamakivaky ny vavony, ny sakafo hariva tantaram-pitiavana dia mety mialoha ny fandroana ifampizarana. Ny fiaraha-miasa dia mahafinaritra - ary faniriana tsindrin-tsakafo mamy.
mpanoratra famoahana mpiasaNavoaka tamin'ny 12. May 2021 15. Jolay 2021 Sokajy Fianakaviana & fiaraha-miasaKeywords milomano, fandroana, eroticism, fotoana erotika, miaraka mandro, Partner, Mpiara-miasa, fiaraha-miasa
indray Lahatsoratra taloha: Fanorana ao an-trano | Wellness